Nkume mara mma na mma ụkwụ dị mkpa maka ụkwụ
Anklets ekwesịghị ịghọ onye nkwụsị
ụkwụ yiri mgbaaka
A na-ese tattoos dịka ọla maka ụkwụ
Mgbe okpomọkụ nke okpomọkụ na-akwado akpụkpọ ụkwụ mara mma dị ka akpụkpọ ụkwụ ị ga-ahọrọ n'ụkwụ gị, mgbe ahụ ọ bụ otu ihe ahụ kwa afọ: gosi ụkwụ gị! Anyị na-enyekwa ndụmọdụ maka ndị na-achọ ịkwado ụkwụ.
Ahịa maka ụkwụ - mma ejiji dịka ọla
Ahịa maka ụkwụ
Onye ọ bụla nwere ike ugbu a na-eji ejiji ma na-ebugharị mkpịsị ụkwụ ma na-abịa na nwayọọ na siri peach paw, bụ n'ụzọ doro anya na uru. Abụọ nke ọma na aesthetically
Ma usoro ejiji ejiji na ala anaghị enweta ike gwụrụ maka ụkwụ na-emekarị na nke a na-ejikarị nkedo ntu ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ nke Manitu.
N'ihi na aka aka dị mma, bụ brisk ụkwụ ọnụ ala: na-achọ ọla!
Ma, olee otú ejiji kwesịrị maka ụkwụ? Gịnịkwa ka a ghaghị ilebara anya na oge okpomọkụ a?
Ihe na-egbuke egbuke na anklet nke anyanwụ na-eme ka ọ nwee mmetụta na akara ngosi ọ bụla. Ịgbụgbọ ahụ na-etinye aka na nkwonkwo ụkwụ ma na-enwu anya onye na-ekiri ihe ọma.
Ọ bụrụ na emetụtaghị ọhụụ na-emetụta ya, sexy Eva mere ihe niile ziri ezi. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-amalite mbido anaghị eche na nkwekọrịta nke nkwonkwo a na-achọ mma na-emetụta nnọọ nsogbu ahụ.
Anklet dị ka ọla maka ụkwụ
Nke ahụ dị mfe ịhụ: ọ bụrụ na ị na-adọkpụ aka elu dị ka o kwere mee, nkwonkwo ahụ na-ebute ya. Ọ bụrụ na ị hapụ ụkwụ ọzọ, ị ga-ahụ ọkwa dị iche.
Nke a na - esote: Otu nkịkị ụkwụ agaghị ebipụ ma ọ bụrụ na ụkwụ dị ike. Nke a na-egosikwa na ogologo nke anklet ga-ekpebisi ike site na njigide nke nkwonkwo ụkwụ na oke ikpe. Ma ọ bụghị ya, ngwa ahụ ga-aghọ ngwa nro.
Uwe mkpịsị aka ndị nwere mma nwere otu ịgba ọchị nke ịgba mgba dị ka mkpịsị aka aka. Ma, ha na-achọ ihe ndị ọzọ maka ọla n'ihi na ọnọdụ anatomical adịghị atụ na ọkwa niile.
N'ihi nke a, ejiri ígwè okporo ígwè dị mgbagwoju anya na-adọrọ mmasị maka ụkwụ. Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị ilebara anya iji hụ na ebumnuche nke mgbanaka ahụ enweghị njigide dị nkọ na isi, ma ọ bụ ihe enyemaka dị oke. Maka na ebe a na-adakwasị ihe nhụsịrị ike na-adịghị ike nke a na-apụghị izere ezere.
Ahịa maka ụkwụ ndị na-adịghị agbachapụ ma na-anọ naanị n'oge okpomọkụ? Enweghị nsogbu na tattoos ndị na-adịghị adịgide adịgide. Ọzọkwa, lee aka nke nna nna. Onye nwere mmasị na ụdị ụdị ụkwụ a bụ google maka Mehndi. N'ihi na Henna nwere ya n'ụkwụ n'onwe ya!
Ụcha mara mma, ihe ịchọ mma ọ bụla dị mma mgbe niile. Ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ọ bụ ọlaedo, ọlaọcha ma ọ bụ ihe eji eri nri. Enwere ihe na-aga n'ihu.
Ezigbo - Ejiji nzuzo
Ghọta - echiche maka ulo
Atụmatụ mmega maka ezinụlọ
Nchịkọta Cocktails maka otu ogige
Ihe Ngosiputa Ngwa - ihe ndi na-eme ka i mara mma
Agbamakwụkwọ - Atụmatụ n'usoro oge
Kedu ka ọnyá ga-esi abanye na nhacha eze? ụmụaka ajụjụ
Ire ọjọọ ọ na-agbaji anya gị? ụmụaka ajụjụ